Uyenza njani into yofakelo olucocekileyo lweMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13 | Ndisuka mac
Uyenza njani into entsha yokufaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13
UJordi Gimenez | | i-MacOS High Sierra, Tutorials
Ngaba uyafuna ukufaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra kwasekuqaleni? Sijongene nenkqubo entsha ye-Apple yokusebenza kweeMac kwaye xa sele siyikhuphele kwikhompyuter yethu, zimbini iintlobo zofakelo ezinokwenziwa: enye esiyibiza ngokuba yi-Update kunye naleyo siyibiza ngokuba icocekile okanye ukuqala.
Kuzo zombini ezi meko, umsebenzisi ukhetha eyona ndlela kwaye ngokucacileyo yonke into iya kuxhomekeka kwinto esiyenzayo mihla le neqela lethu, ukuba siqokelela uninzi lwezicelo okanye amaxwebhu kunye nabanye. Enye yedatha ebalulekileyo kuwo omabini la matyala, nokuba sihlaziya okanye sifaka ukusuka ekuqaleni, kunyanzelekile ukuba senze ikopi yokugcinwa kwe-Mac yethu kwi-Time Machine okanye efanayo, ke siya kuyiphepha intloko xa kukho into engahambanga kakuhle.
Inyani yile yokuba olu hlobo lohlaziyo olubalulekileyo luyacetyiswa ukuba uzenze kwasekuqaleni nangona ingeyomfuneko, oko kukuthi, Ukuba awufuni ukufaka iMacOS Sierra kwasekuqaleni, khuphela ngokulula kwiVenkile ye-Mac App kwaye ucofe ku fakelo. Sincoma ukuba uqalise ukufakela ukususela ekuqaleni ukuze ususe naziphi na izicelo ezikhutshiweyo, iimpazamo okanye nantoni na enokwenzakalisa amava ngohlobo olutsha lwenkqubo, yiya phambili enganyanzelekanga, sinokuhlaziya kwaye sihambe.
1 Ukufakwa ukusuka ekuqaleni
2 Uhlaziyo lwezixhobo
Ukufakwa ukusuka ekuqaleni
Kule meko, into esiza kuyenza kulo nyaka kukubeka bucala isixhobo esincedayo ekwenzeni i-boot disk kwi-USB okanye kwidiski yangaphandle ene-8 GB yokugcina kunye Siza kuyenza ukusuka kwiXesha. Into yokuqala esiza kuyenza kukuba khuphela i-MacOS High Sierra kwiVenkile ye App, Xa ukukhuphela kugqityiwe asizukuyifaka, siya kuvala isifakeli ngokucinezela cmd + Q.
Nje ukuba ukhuphelo luqale sinokuqhubeka nenkqubo yokufaka ukusuka ekuqaleni kwaye ilula kakhulu. Fometha kwaye unike igama kwakhona kwi-USB emva koko siyavula Indawo yokukhwelela kwaye sikopa ikhowudi Ukushiya apha ngezantsi, kuya kusicela ngegama eligqithisiweyo, siyifaka kwaye siqhubeke.
I-sudo / ii -application / Faka i-\_ MacOS \_ Ephakamileyo \_ iSierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia -volume / Volumes / Untitled -applicationpath / Applications / Install \_ macOS \_ High \_ Sierra.app
Silungile, ngoku senze i-installer kufuneka silinde i-MacOS High Sierra entsha ukuba ikhutshelwe kwi-USB. Ukufomatha kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo kwaye kufuneka sifomathile kuphela idiski yethu yangaphakathi apho ikhoyo inkqubo endala yokusebenza, oko kukuthi, iMacOS Sierra. Ke ngokulula nge-USB okanye idiski yangaphandle exhunywe kwi-Mac, into ekufuneka siyenzile kukuba ngokucinezela Alt kwaye ufake inkqubo entsha yeMacOS ePhakamileyo yeSierra.
Ukuba sifuna ukutsiba ukufakela ekuqaleni, Ukuhlaziya ngokulula iMac kwiVenkile yeApple yeMac. Into eyenzayo ukufaka inkqubo ngaphezulu kwento esinayo kwaye nangona kuyinyani ukuba iApple ayisithinteli ekwenzeni olu hlobo lohlaziyo, ukuba sineefayile ezininzi, usetyenziso kunye nezinye kwiMac, kungahamba ixesha into enye iyacotha. Siyabazi nabantu abangazange bakwenze okucocekileyo okanye ukuqala ukufaka iiMac zabo kwaye khange babenangxaki.
Kwimeko nayiphi na into, ukuhlaziywa kweMac kulula kwaye kufuneka silandele amanyathelo aboniswe ngumfaki we-MacOS High Sierra. Siyabona ukuba zilula kakhulu kwaye ngokusisiseko kukunika: okulandelayo - okulandelayo - okulandelayo.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba ugcino kwezi meko zikwabalulekile, sinokufumana amandla ombane ngokungalindelekanga okanye okunye ukubuyela umva okuchitha emva kwemini kwaye ngakumbi amaxwebhu esinayo kwikhompyuter, ngaphambi kokuba ucofe iqhosha lokuhlaziya Emva kokukhuphela, kubalulekile ukwenza backup usebenzisa iTime Machine okanye nasiphi na isixhobo esifunayo. Ukuba unamathandabuzo ungasebenzisa icandelo lamagqabaza.
Okokugqibela, yenze icace into yokuba ukufakwa kwasekuqaleni kunokuba nzima ngakumbi kwabo basebenzisi abangaqhelananga neeMacs okanye abasandula ukuthenga izixhobo, ewe ngenene ukuba kutshanje uneMac khange ubenalo ixesha "lokuyilayisha crap" ngoko ke kungcono ukuba uyihlaziye ngokuthe ngqo kwaye awuzukuba nangxaki nayo kwaye izixhobo zakho ziya kusebenza ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyenza njani into entsha yokufaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13
Izimvo ezi-34, shiya ezakho
Molo, ndine-Imac ukusukela ngo-2013 nasemva kokufomatha ikhompyuter kunye nokuzama ukufaka kwakhona i-OSx, le nkqubo indixelela ukuba iSierra ayifumaneki kwiVenkile ye App ...
UJordi Gimenez sitsho
Ngaba unayo i-bootable yokusetha i-USB? Ngaba unayo i-wifi esebenzayo?
Ngayiphi na imeko, ukuba ulandele amanyathelo, anokukusebenzela, ngapha koko unokuhlala uphinde ufake kwakhona kugcino lweMatshini yeXesha.
Phendula Jordi Giménez
Molo, ukuba ndineWi-Fi esebenzayo kodwa andina-USB ndiyenzileyo okanye ikopi kuMatshini weXesha… kwaye ikhompyuter sele ifomathiwe ...
Jonga, sihlala silumkisa malunga ne-backups huh!
Zama ukucima iMac kwaye xa iqala ngokucinezela i-Option-Command-R, emva koko uhlaziye kuhlobo lwamva nje lwe-macOS ehambelana nekhompyuter yakho
Inyani yile yokuba ndinazo zonke iifayile zam ezikhuselekileyo kodwa bendifuna ukufaka i-OS kwasekuqaleni ... Ndilandele amanyathelo aqala nge-Command + R kodwa xa ndikhangela iVenkile ye App i-OS yayingasafumaneki ... ukuba ndiza Ukwazi ukuba oku ngekhe kwenzeke kwenzeka kum ukuba ifomathile inyani….
Kulungile ndinombuzo, ndine-macbook pro 2012 kwaye bendifuna ukuyifaka kwasekuqaleni, ndineedrive ezimbini ezinzima, i-ssd apho ndinenkqubo kunye nezicelo ezifakiweyo kunye nenye i-HDD apho ndithanda khona iifoto, umculo kunye nezinye , yenza ufakelo kwasekuqaleni, zicocekile zombini iidiski? Okanye ngaba ifomathiwe i-ssd kuphela?
Molo, fomatha nje i-SSD enye ayimfuneko
Molo Borja, kuya kufuneka ufomathile kuphela idiski apho une-OS, ungachukumisi enye.
Molo kwakhona, ndizama ukwenza i-usb kwenye imac ene-sierra kwaye xa ndincamathisela umgca kwisiphelo indixelela….
Kuya kufuneka uchaze indlela yevolumu.
Ndizamile amatyeli aliqela ...
Lo myalelo kukwenzela ukufakela iMacOS ePhakamileyo yeSierra, hayi iMacOS Sierra
Ewe imiyalelo yakho ayilunganga, cela indlela yevolumu
"Sudo / Izicelo / Faka \_ macOS \_ High \_ Sierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia -volume / Volumes / Untitled -applicationpath / Applications / Install \_ macOS \_ High \_ Sierra.app"
Ijongeka ngathi glitch kwizikripthi xa ubhala ikhowudi ngesandla akunjalo?
Kwaye umyalelo uyafana kuzo zombini iimeko
Ngapha koko ndikhuphele kwaye ndancamathisela, le ndiyibekileyo sele ilungisiwe, sele ndinayo i-usb installer 😛 Tks!
UWinston duran sitsho
Ndine-iMac Late 2009, ndine-MacOS Sierra efakiweyo kwaye xa ndizama ukuhlaziya kwi-MacOS High Sierra, ndifumana impazamo Kwakukho impazamo ekuqinisekiseni i-firmware ¨
Ngaba sikhona isisombululo kule ngxaki ???
Phendula uWinston Duran
Winston molo, yenza uncedo lokuqala lokujonga kwi-OS X kwaye ujonge uhlaziyo oluphezulu lwe-sierra okanye ulikhuphele kwakhona. ngokubhekisele
Ndiyenzile kwaye ndiyirekhodile i-usb ukuyifaka ukusuka ku-0, kodwa ufakelo alugqityi kwaye luyandithumela kwakhona ukubuyisela inkqubo.
Kungenzeka ukuba i-SSD (iSanDisk) ayihambelani kwaye yiyo loo nto inika impazamo okanye ingandivumeli ukuba ndifake?
Abalinganiswa ngaphambi komyalelo «ivolumu» ayilunganga; Kubonakala ngathi zonke iiwebhusayithi zikope ukusuka kumthombo omnye ongalunganga. Ukuyilungisa, susa i-dash esele ikhona kwisicatshulwa kwaye ubeke endaweni yayo iideshi ezimbini ezintsha. Ungasebenzisa oku kulandelayo:
Sudo / Usetyenziso / Faka iMacOS ePhakamileyo yeSierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled-applicationpath / Applications / Install MacOS High Sierra.app
Xa kufikwa ekususeni idiski ephambili (i-SSD) kwiiDiski zeeNkonzo, ngaba kufanele ukuba i-AFPS okanye iMacOS Plus (enerejista) isetelwe?
Ukuba yi-SSD unokubeka i-AFPS okanye iMacOS Plus, nokuba yeyiphi na oyifunayo
Ulawulo lwefayile nge-SSD ithi iApple iyakhawuleza kwaye ibhetele nge-AFPS
UManu emva kokufunda amaqonga aliqela acebisa ukubeka iMacOS Plus (ngobhaliso) nje ukuba kugqityiwe ukufakela ukuba ujonga i-hard drive yakho ibonakala ne-AFPS
UFrancisco Valenzuela Rojas sitsho
Phezolo ndenze i-usb drive nge-terminal, igalelo liyaxatyiswa. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ndiza kulinda iintsuku ezimbalwa, kuba kukho iinkqubo ezingasebenzi kunye nokuhlaziywa okutsha.
Phendula uFrancisco Valenzuela Rojas
Ndibonile ukuba abanye abasebenzisi banengxaki efanayo endiyibonisayo ngoku, ndizamile ukuyivuselela, kodwa indinika impazamo yokuqinisekisa iFirnware. Ndirekhode i-USB yokwenza ufakelo lwe-0, kodwa ayizange igqibe ukufaka kwaye yandithumela kwisikrini sokubuyisela.
UYESU KWAKHO sitsho
Eyona nto inye yenzekayo kum kwi-macpro ka-2013 ene-1tb owc ssd, ndizamile ukuvuselela kuphela kwaye nokuba kwasekuqaleni khange ndiphumelele okanye ndishiywe kwiscreen nefolda kunye nophawu lombuzo ngaphakathi kokudanyaza.
Phendula kuYESU KWAKHO
Molo, kwi-macbook pro yam ukusukela ngo-2012, ifake i-sierra ephezulu ukusuka ekuqaleni kwisahlulelo, kuvela ukuba amaqhosha aliqela awasebenzi, xa usuka eSerra kungekho ngxaki ngekhibhodi, naziphi na izimvo? enkosi kakhulu
Kulungile. Ndifuna ukukhuphela iSierra ePhakamileyo ukuze ndisebenzise i-ssd yangaphandle njengeyona diski iphambili ye-iMac yam. Inyani yile yokuba sele ndiyifakile, kwaye ayizukundivumela ndiyikhuphele kwakhona. Ndingayenza njani ukuqala inkqubo yonke kamva?
Xa ufaka iMac OS ephezulu yeSierra, izakundibuza iakhawunti ye-iCloud, kuba andinayo, kuthiwa xa ufaka kwasekuqaleni ingathi ndiyithengile intsha.
Molo Ndiyifomatha njani iMacbook Pro kodwa ngexesha lokufakwa kwe-OS ihlala embindini kwaye ayisayifaki. Ndiyishiyile iintsuku ukujonga ukuba iyasebenza kodwa hayi. Kwakhona tshintsha i-hard drive yenye endandinayo kodwa ayindivumeli nokuba ndenze ifomathi ye-Mac OS (enerejista).
Uxolo malunga nobumdaka ... uyazi ukuba kukho ingxaki yokufaka ukusuka ekuqaleni kwisahlulelo esele siyi-APFS? Enkosi
kwi-iMAC ngasekupheleni kuka-2013, ndenza i-USB kunye nayo yonke into ok. Ndiqala nge-ALT, ndikhetha i-USB ... Kwaye emva kwemizuzu embalwa ndifumana isikrini esimnyama esitshintsha phakathi kwemouse kunye nebhodi yezitshixo (kwaye ayiyiboni imouse)
Lilonke, andikwazi ... Emva koko ndiqala kwakhona i-COmand + Option + R ... kwaye ke ukuba iyaqala ukusebenza. Iyandibuza into endifuna ukuyenza, kwaye ndiyifomatha i-SSD ukuyifaka kwasekuqaleni. Umcimbi kukuba i-SSD sele inayo i-APFS ... Faka, kodwa ndijonga kwilog kwaye zininzi iimpazamo, ngakumbi ezinxulumene ne-AFPS ... Iyonke, emva kwemizuzu eli-15 ithi kukho impazamo, kwaye ayifaki nantoni na.
Ndenza into enye kwakhona, kwaye iziphumo ziyafana; kwaye andinakukwazi ukuhlengahlengisa i-SSD iye kwii-MacOs ngerejista ... ayizukuvumela.
Ekugqibeleni kuye kwafuneka ndibuyele kwi-Intanethi, emva koko ndibeke iTimeMachine ... kwaye ke, akukho nto inokuyifaka kwasekuqaleni
Molo Miguel; Into yokuqala oyibalayo iyenzeka nakum (ndiphantse ndonwabile ayindim ndedwa) kwaye ndinemodeli efanayo yeMac (ngasekupheleni kuka-2013) kunye ne-SSD hard drive (kwimeko yam ndiyitshintshe kwi-Apple I-SAT kwaye bandinike engafanelekanga) (into malunga nokungaqondi imouse emva kokukhetha ulwahlulo lofakelo lwe-USB).
Ndade ndavula incoko kunye ne-Apple SAT kwaye ndaphela ndimsa kwi-SAT ebonakalayo (bendineentsuku ezintathu de iApple Care iphelelwe lixesha); Akukho kula matyala mabini ayicombululeyo okanye ayifumanise njengempazamo, ke apho ndinayo ekhaya, yonke into isebenza ngokugqibeleleyo ngaphandle kweenkcukacha ezincinci.
Xa ndiyifomatha ngoLawulo lwe-Alt-R andisenangxaki, ngethamsanqa, ndihlala ndikwifomathi ye-APFS.
Nangona kunjalo, kwi-macbook yam ka-2016 akukho nto injalo kwaye yonke into isebenza ngokwesiqhelo; iMac nayo ikwenzile ngaphandle kweengxaki ngaphambi kokuphuculwa kweSierra ePhakamileyo kunye neAPFS.
Imibuliso kunye namathamsanqa.
Molo igama lam ndinguAntonio. Nceda ubone ukuba ungandinceda na, ndiyabulela kwangaphambili.
Ndine-mini Yosemite ene-Sierra operating system, ndiye ndayokuhlaziya kwaye ndibona ukuba kuthathe ixesha elide ukuyicima, ngoku ayizukuqala.
Yiba nebhodi yezitshixo engeyiyo iapile yinto eqhelekileyo yokuThembela
Ndine-backups kwi-hard drive yangaphandle, kodwa andikwazi ukuyikhupha kwi-disk.
M. José sitsho
Molo, igama lam ndinguM. José. Ndisandula ukuthenga iMacBook Pro kwaye andazi ukuba ndingazifaka na iinkqubo ezazisetyenziswa ngaphambili njengeprinta yomculi kunye ne-corel (ndicinga ukuba isebenzisa inkqubo eyahlukileyo yokusebenza). Ukuba kunokwenzeka ndingathanda ukuba undixelele ukuba ndenze njani.
Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho
Phendula uM. José
Zonke iinguqulelo ze-macOS "zinomngcipheko" oxeliweyo kwiSierra ePhakamileyo
Ukuhlawulela izithuthi zikawonkewonke eSingapore ngeApple Pay kunokuba yinyani kwi2018